कहिलेकाँही, यदि तपाइँ तपाइँको बाहिरी ड्रेसिंग लुक धेरै सरल छ भन्ने लाग्छ भने, तपाइँ आरामदायक खेल शैलीमा बेसबल टोपी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको शैली मा एक ठूलो मद्दत हुनेछ। यसको लागि सजावट गर्न धेरै साना वस्तुहरूको आवश्यक पर्दैन, र बेसबल टोपीले तपाईंको शैली क्याजुअल र ह्यान्डसम बनाउन सक्छ, तर के ...
यो ट्योर हो कि धेरै केटीहरूले फ्ल्याट ब्रिम टोपी मन पराउँछन्, किनकी यो लगाएर, तपाई जेसुकै साधारण भए पनि तपाईलाई "फॅशनिस्टा" भन्ने लेबल दिइनेछ। त्यसोभए प्रश्न यो छ, राम्रो देखिनुको लागि समतल ब्रिम लगाउनको लागि उत्तम तरिका के हो? फ्लैट-ब्यान भएको टोपी के हो? कुन अनुहारको आकार उपयुक्त छ ...
टोपीको लागि कसरी कपडा छनौट गर्ने
पहिले कटन टवील टोपीको बारेमा कुरा गरौं, त्यहाँ प्राय: धेरै जसो प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया प्रत्येक कपडाको निश्चित धागो गणना र घनत्व हुन्छ। धागो गणनाले बुनेको धागाको मोटाईलाई जनाउँछ। घनत्व: यो प्रति इकाई क्षेत्र धागो गणनाको सामग्री हो, सामान्यतया4वर्ग इन्च। ठूलो संख्या repres ...
महिलाका लागि सबै भन्दा राम्रो टोपी के हो
आउटक्लोथ्सका लागि, जे जस्तो प्रकारको भए पनि, टोपीको साथ तपाईलाई तुरुन्तै शोभायमान बनाउन सजिलो तरीका हो। त्यसोभए तपाईसँग कस्तो प्रकारको टोपी हुन सक्छ? महिलाहरूका लागि जो लुगा लगाउन मन पराउँछन्, यी फैशनेबल र कालातीत विकल्पहरू हुन्, जुन बुद्धिमानी छनौटहरू हुन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं टोपीको बारेमा धेरै जान्नुहुन्न, भेरि ...
एक शताब्दीका पौराणिक कथा, उही नामको १, 3535 फिल्म, "शीर्ष टोपीमा नायक, फिल्म फेड अस्टायर फेडोरा टोपीको इमेज धारण गर्छिन् र सुरुचिपूर्ण नृत्य चरणले गीत र नृत्य फिल्महरूको पुस्ताको निर्माणलाई प्रभावित गर्दछ, र उच्च टोपीको एकीकरणमा फिल्म पोस्टर को डिजाइन प्रभावशाली छ। T ...
चीनमा टोपीको उत्पत्ति
जाडो मौसममा, चिसो हुनबाट जोगाउन र तातो राख्नको लागि मानिसहरूले अक्सर टोपी लगाउँदछन्। तर जब मानिसहरूले टोपी प्रयोग गर्न थाले, यो तातो राख्न थिएन, तर तिनीहरूलाई गहनाको रूपमा प्रयोग गर्न। टोपी हाम्रो देशमा एकदम चाँडै आविष्कार गरिएको थियो, मुहावरे "उच्च-आवाज" "" मुकुट "," मुकुट ", लाई बुझाउँछ ...